Tag: ascii paụnd | Gosi Top
Tag: "ascii paụnd"
Tag: ascii paụnd
Olee otú pịnye GBP pound ịrịba ama (£) iji US keyboard, na Windows 10?
On a US keyboard layout e nweghị £ isi. Iji nweta ihe nnọchianya ọ na-achọrọ pịa ụfọdụ isi n'ịgwa. Iji nweta £ akara mesịa na ihuenyo, ime ndị na-esonụ: Jide Alt isi na pịnye 0163 Note: The above will only work using the number pad keys…
Olee otú pịnye GBP pound ịrịba ama (£) iji US keyboard, na Windows 8 na Windows 8.1?
On a US keyboard layout e nweghị £ isi. Iji nweta ihe nnọchianya ọ na-achọrọ pịa ụfọdụ isi n'ịgwa. Iji nweta £ akara mesịa na ihuenyo, ime ndị na-esonụ: Jide Alt isi na pịnye 0 1 6 3 Note: The above will only work using the…
Olee otú Iji Windows 2 comments Bish Jaishi